Devanagari Newsब्राजिल र अर्जेन्टिनाको खेल किन भयो स्थगित ? — Devanagari News
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको खेल किन भयो स्थगित ?
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली समय अनुसार सोमबार विहान ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीच फुटबल खेल हुने तय थियो । सन् २०२२ विश्वकप छनोट अन्तर्गतको यो खेल अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो । त्यसको कारण हो कोरोना भाइरस महामारी र यसको सावधानीका लागि बनाइएका नियम ।
ब्राजिलले अर्जेन्टिनाका चार खेलाडीले आफ्नो देशको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेका कारण खेलमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गर्‍यो । तर अर्जेन्टिनाले भने ती चार जना खेलाडीविना खेलमा सहभागी नहुने बताएपछि खेल स्थगित हुन पुगेको हो ।
ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेजसंगै जिओभानी लो सेल्सो, क्रिस्टियन रोमेरो र एमिलियानो बुएन्डियाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेका थिए ।
इंगल्याण्डमा लिग खेल्ने उनीहरु ब्राजिल आउँदा झुक्याएर इन्ट्री फर्म भरेको ब्राजिलका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ब्राजिलले १४ दिनयता इंगल्याण्डमा रहेका व्यक्तिलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
ब्राजिलको सरकारी निकायले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अर्जेन्टिनी फुटबलले ब्राजिलको नियम पालना गरेनन् र फारम भर्दा गलत सूचना उल्लेख गरे । ती खेलाडी ब्राजिल प्रवेश गरेपछि ब्राजिलको स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमनकारी निकाय (एन्भिसा) ले ती खेलाडीलाई तत्कालै क्वारेन्टिनमा राख्न र कुनै पनि गतिविधिमा गर्न प्रतिबन्ध लगायो ।
तर ती खेलाडी पनि खेलका लागि मैदान पुगे । अर्जेन्टिनाले ब्राजिलले प्रतिबन्ध लगाएकामध्ये तीन खेलाडीलाई त सुरुवाती लाइनअपमै राखेका थिए । त्यसैले खेल सुरु हुनु चार मिनेटअघि ब्राजिलको स्वास्थ्य अधिकारीले मैदानमै प्रवेश गरेर खेल रोके ।
अर्जेन्टिनी फुटबल एशोसिएसनले उक्त घटनालाई दुर्भाग्य भनेको छ । ‘आजको घटना फुटबलका लागि दुर्भाग्य हो, यसले धेरै नराम्रो गरेको छ । चार खेलाडी ड्रेसिङ रुममा गइसकेपछि खेल स्थगित हुनु दुखद हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
डेनमार्क अपराजित, क्रोएसियाको जित
हालान्डको ह्याट्रिकमा नर्वेको सानदार जित
ग्रिजमनको दुई गोलमा फ्रान्सको जित
रोनाल्डोले म्यानचेस्टर युनाइटेडमा प्रशिक्षण थाले